အိန္ဒိယနိုင်ငံ အာသံပြည်နယ်တွင် ရေကြီးရေလျှံမှုနှင့် ရင်ဆိုင်နေရ - Xinhua News Agency
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အာသံပြည်နယ်တွင် ရေကြီးရေလျှံမှုနှင့် ရင်ဆိုင်နေရ
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း အာသံပြည်နယ် Nagaon ခရိုင်တွင် ရေဖုံးလွှမ်းနေစဉ် ယာယီဖောင်တစ်ခုကို လှော်ခတ်နေသော မိန်းကလေးတစ်ဦးအား ဇွန် ၁၇ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
နာဂွန်း၊ အိန္ဒိယ၊ ဇွန် ၁၈ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း အာသံပြည်နယ် Nagaon ခရိုင်တွင် ယာယီဖောင်တစ်ခုကို လှော်ခတ်နေသော ကျေးရွာသားတစ်ဦးအား ဇွန် ၁၇ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း အာသံပြည်နယ် Nagaon ခရိုင်တွင် ရေဖုံးလွှမ်းနေစဉ် ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများကို သယ်ဆောင်နေသော အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား ဇွန် ၁၇ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း အာသံပြည်နယ် Nagaon ခရိုင်တွင် ရေဖုံးလွှမ်းနေသော လမ်းမတစ်နေရာတွင် ဖြတ်သန်းမောင်းနှင်နေသော ကားတစ်ဦးအား ဇွန် ၁၇ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း အာသံပြည်နယ် Nagaon ခရိုင်တွင် ရေဖုံးလွှမ်းနေသော လမ်းမအား ဖြတ်သန်းသွားလာနေသော ကျေးရွာသူ၊ ရွာသားများအား ဇွန် ၁၇ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း အာသံပြည်နယ်တွင် ရေကြီးရေလျှံမှုကို ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ရေကြီးရေလျှံမှုသည် အာသံပြည်နယ်၌ မုတ်သုံရာသီအတွင်း နှစ်စဉ်ဖြစ်ပွားနေသော ဖြစ်ရပ်လည်း ဖြစ်သည်။ (Xinhua)
Asia Album: India’s Assam battles flooding
NAGAON, India, June 18 (Xinhua) — India’s northeastern state of Assam is battlingagrim flood situation. Floods are an annual occurrence in Assam during the monsoon season.
Photo 1 : A girl rowsamakeshift raft in flood water in Nagaon district of India’s northeastern state of Assam, June 17, 2022. (Str/Xinhua)
Photo2: A villager rowsamakeshift raft in flood water in Nagaon district of India’s northeastern state of Assam, June 17, 2022. (Str/Xinhua)
Photo3: A woman carries her belongings as she walks in flood water in Nagaon district of India’s northeastern state of Assam, June 17, 2022. (Str/Xinhua)
Photo4: A van rides onaflooded road in Nagaon district of India’s northeastern state of Assam, June 17, 2022. (Str/Xinhua)
Photo5: Villagers wade throughaflooded road in Nagaon district of India’s northeastern state of Assam, June 17, 2022. (Str/Xinhua)■
ကိုင်ရိုမြို့တွင် အဆောက်အအုံပြိုကျမှုကြောင့် လူ ၆ ဦးသေဆုံး
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံက တရုတ်-ပါကစ္စတန်စီးပွားရေးစင်္ကြံ (CPEC) မှတစ်ဆင့် အောင်မြင်မှုများစွာရရှိ